„Die Heilige Schrift ist das inspirierte Wort Gottes, das getreue Textzeugnis des Evangeliums und die wahre und genaue Wiedergabe der Offenbarung Gottes an den Menschen. Insofern ist die Heilige Schrift unfehlbar und grundlegend für die Kirche in allen Lehr- und Lebensfragen“ (2. တိ 3,15နှစ်ဆယ် 2. ဓာတ်ဆီ 1,20-21; Joh 17,17).
ကျမ်းစာ၏သက်သေခံချက်အရဘုရားသခင်သည်ထာဝရ၊ တူညီတော်မူသော်လည်းကွဲပြားသောပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတွင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ သူသည်တစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ ထာဝရ၊ မပြောင်းလဲနိုင်သော၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ ကိုယ်တော်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော၊ စကြဝtheာကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်။ လူသားတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ TRANSCEND သော်လည်း, ပြုမူ ...
ဘုရားသခငျသညျသားတျောဘုရားသခငျသညျထာဝရဘုရားထံမှဖွားမြင်, ထိုနတ်ဘုရား၏ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ခမည်းတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ သူအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ခမည်းတော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေရန်ဇာတိပကတိ၌ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပconိသန္ဓေယူပြီးအပျိုစင်မာရိထံမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Christ ၀ ံဂေလိတရားသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်ငါတို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံတော်မူခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံလိုက်ရခြင်းအကြောင်းမှာကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်ထမြောက်ခဲ့ပြီးနောက်တပည့်တော်များရှေ့ထင်ရှားခဲ့သည်။ Christ ၀ ံဂေလိတရားသည်သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားရှင်၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးခမည်းတော်မှသားတော်အားဖြင့်ထာဝရထွက်ကြွသည်။ သူသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယုံကြည်သူအားလုံးကိုဘုရားသခင်စေလွှတ်ပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နေထိုင်သည်၊ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစည်းလုံးညီညွတ်စေပြီးနောင်တနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေပြီးခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီမွမ်းမံခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲပေးသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်
အပြစ်တရားသည်မတရားမှုကိုဘုရားသခင်ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သောအခြေအနေဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်Eveဝမှတစ်ဆင့်အပြစ်တရားသည်ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါလူသားသည်အပြစ်တရား၏ထမ်းပိုးအောက်၌ရှိနေပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာဖယ်ရှားနိုင်သောထမ်းပိုးဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိသောလူသားတို့၏အခြေအနေသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်ဘုရားသခင်နှင့်ကိုယ်တော့်အလိုတော်နှင့်ပတ်သက်သောမိမိ၏အကျိုးစီးပွားကို ဦး တည်သည်။
အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်တော်မူသောသူတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ church ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောရန်၊ ဗတ္တိဇံခံရန်ခရစ်တော်မိန့်မှာသမျှကိုသွန်သင်ရန်နှင့်သိုးတော်စုကိုကျွေးမွေးရန်အသင်းတော်သည်အသင်းတော်၌တာဝန်ရှိသည်။ ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရာတွင်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုခံယူသောဘုရားကျောင်းသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ယူပြီးမိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်သည်။
ကောင်းကင်တမန်များသည် ဝိညာဉ်သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သင့်အား လွတ်လပ်သောဆန္ဒဖြင့် ပေးအပ်ထားသည်။ သန့်ရှင်းသော ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်ကို စေတမန်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ဝတ်ပြုကြပြီး၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုသူများအတွက် ဝိညာဉ်တော်များဖြစ်ကြပြီး ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်တွင် အတူလိုက်ပါလာမည်ဖြစ်သည်။ နာခံမှုမရှိသော ကောင်းကင်တမန်များကို နတ်ဆိုးများ၊ နတ်ဆိုးများနှင့် ညစ်ညမ်းသောနတ်များဟုခေါ်သည် (ဟေဗြဲ) 1,14; ဗျာ 1,1; 22,6; Mt ၂5,31; 2. ပတေရုသ 2,4; Mk 1,23; Mt…
ယင်း၏အခြေခံပုံစံတွင်ပaိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့အကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ပcovenantိညာဉ်သို့မဟုတ်သဘောတူညီမှုသည်လူနှစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး ထက်ပိုသောလူတို့အကြားဆက်ဆံရေးကိုအုပ်ချုပ်သည့်နည်းတူအုပ်ချုပ်သည်။ ပtestိညာဉ်တရားသစ်သည်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အကြောင်းမှာသူသည်သက်သေခံသူယေရှုသေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုနားလည်ခြင်းသည်ယုံကြည်သူအတွက်အရေးကြီးသည်။
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်ဘုန်းတော်ကိုတုန့်ပြန်စေသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းဆီသို့ဘုရားသခင်ထံမိမိကိုယ်ကိုဖွင့်ပြခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယုံကြည်သူသည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်မှတစ်ဆင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသို့ဝင်သည်။ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နှိမ့်ချစွာ၊